Yakachipa Xbox One Controller - Yakanyanya Kuchipa Xbox One, Xbox Series X, S Controllers | la-manette.com
Microsoft's official Xbox One controllers yakanaka kwazvo mhando uye haimbofa yakakuregedza iwe, asi vamwe vanogona kuwana yavo $ 60 mutengo tag zvishoma padivi rinodhura. Neraki, kune akasiyana-siyana echitatu-bato sarudzo anowanikwa pamusika, mamwe acho achitopa akasiyana maitiro uye mabasa ekugadzirisa kurasikirwa kweakakosha maficha kubva kune vepamutemo controller, senge waya mitambo kana rutsigiro. Windows 10.
Sarudzo yedu: Yakavandudzwa PowerA Spectra Wired Controller
Kune yakanakisa chiyero chemutengo, kushanda, kusimba, uye maficha, akanakisa controller iPowerA Spectra Yakavhenekerwa Wired Controller. Iyo 33% yakachipa kupfuura iyo yepamutemo Xbox One controller, asi ichiri kugadzirwa zvakanaka. Iyo inouyawo neyakakosha mwenje mhedzisiro iyo inokurega iwe uchitamba mu225 akasiyana mavara masitaera. Iwe unozofanirwa kuishandisa newaya, asi rombo rakanaka mutongi anouya netambo ye3-mita-yakareba inobaira muXbox One's USB port (semamwe ese mamwe ma controller ane waya pane iyi runyorwa).
Yakachipa sarudzo : QUMOX wired gamepad
Iyo QUMOX Wired Gamepad yeXbox One idiki uye yakatsvinda diki controller ine yakatsvedzerera ganda dema, inokwenenzverwa nemitsara miviri yegirinhi inomonereka pazvibato. Izvo zvakare zvakachipa, pamadhora makumi maviri chete, zvichiita kuti ive yakanyanya kunaka sarudzo kana iwe uri mubhajeti. Kana iwe uchida chimwe chinhu chinotaridzika zvakanaka uye chisingadhure zvakanyanya, iyi isarudzo yakanaka.
PowerA inopa chena Xbox One controller yakagadzirirwa kuita sekunge iwe unogona kutenga wakananga kubva kuMicrosoft Store, uye nemutengo wakanaka wakasimba, zvakare. Izvo hazvina kuoma seyakakwidziridzwa Spectra, zvisinei.
Sarudzo yakasarudzika: PDP Afterglow wired controller
Iyo PDP Afterglow controller iri padivi nePowerA Wired maererano nekusimba uye mutengo, asi inomira kunze nekupenya kwayo. Iine mana anogoneka ma LED mune controller uye ganda rakajeka, iyo PDP Afterglow ndiyo yaunoda kana iwe uchitsvaga diki maitiro.
Wireless sarudzo: Mutongi asina Magetsi Volt
Kana iwe uchida controller ine isina waya inoshanda saka iwe uchafanirwa kuenda kune iyo sanq waya Electric Volt controller. Iyo inodhura zvakanyanya kupfuura vazhinji vevanodzora pane iyi runyorwa, pamadhora makumi mashanu neshanu, asi ichiri yakachipa kupfuura iyo yepamutemo vhezheni kubva kuMicrosoft.
Pakupedzisira, mumwe nemumwe weava vatongi ane chimwe chinhu chekupa chinovaita vakuru. Musika wechitatu-bato Xbox One, Xbox Series X, S controllers haina kukura kudaro, asi zvakanaka kuti pane dzimwe sarudzo dzemhando. Dai ndaifanira kusarudza imwe, ndaizoenda kune iyo isina waya controller. Magetsi Volt nekuti kuseta kwangu kunoda waya isina waya.
Verenga zvakare: Ndeupi Mutongi weRECALBOX?
Pamusoro 7 Game Consoles: Mhinduro